Fitaterana vonjy maika :: Tafakatra avo roa heny ny saran-dalana mihazo ny faritra • AoRaha
Samy mampiakatra ny saran-dalana amin’izay mety aminy ireo kaoperativam-pitaterana amin’ny zotra nasionaly sy rezionaly, taorian’ny fanapahan-kevitra amin’ny fanoka­fana vonjimaika ny fitaterana mampitohy an’Antananarivo amin’ny faritra hafa. Misy no tafakatra avo roa heny ny saran-dalana. Eo ihany koa ireo nametraka sarany amin’ ny fampiakarana mitovy ho an’ny kaoperativa rehetra, tahaka ny etsy amin’ny tobim-piantsonana Fasan’ny karàna. An-kilany, nanazava ny mini­sitry ny Fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetr- andro, Randriamandranto Joel, fa ny sandan’ny lasantsy miverina no hatao mizara amin’ny isan’ny mpandeha ka mampiakatra kely ny saran-dalana.
“Tsy mitondra mpandeha intsony ny mpamily rehefa miverina. Lasa 60 000 ariary ny vola aloa makany Mahajanga raha tokony ho 30 000 ariary. Efa nahafeno fiara iray izahay, amin’izao fotoana izao (Ndrl: omaly tamin’ny 10 ora maraina). Ny rahampitso (Ndrl: anio) sisa no andrasana satria misy taratasy fenoina”, hoy ny tompon’andraikitry ny kaoperativa Cotriag, izay manao ny fitaterana mampitohy an’Antananarivo amin’i Mahajanga.
Tafakatra 120 000 ariary kosa ny saran-dalana mihazo an’Ambanja raha 60 000 ariary ny saran-dalana tena izy. 50 000 ariary ny saran-dalana mihazo an’Ambatondrazaka.
Nanapa-kevitra indray ny mpitantana ny tobim-piantsonana Fasan’ny karàna fa miampy 15 000 ariary amin’ny maha­zatra isan’andro ny saran-dalana aloan’ny olona tsirairay.
“Tsy misy mahazo mitondra olona miverina ireo taksiborosy isaky ny kaoperativa. Hanampiana ny lasantsy hiverenana hody aty Antanana­rivo io fiakarana saran-dalana io satria miantoka an’ireo mpandeha ireo hody fotsiny no hataon’ny mpitaritra”, hoy Randriamparany Martin, filoha lefitry ny tobim-piantsonana Fasan’ny karàna.
Misy ny fandaminana napetraka ho an’ireo mpandeha rehetra. Tsy maintsy nameno taratasy fahazoan-dalana mivoaka eto Antananarivo ny tsirairay.
Fonjan’Antsirabe :: Nandraisana fepetra ireo gadra vaovao
Hamehana ara-pahasalamana :: Manohitra ny fanararaotana politika amin’izao toe-draharaha izao ny K3F